Kedu otu esi akwụ ụgwọ na weebụsaịtị anyị site na ịnyefe SWIFT ego ụwa?
Site HGH Thailand October 08, 2017
Kedu ihe ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa? Nchekwa, ọsọ na nchekwa nke iji
Ụgwọ SWIFT bụ ịkwụsị ego n'etiti mba dị iche iche n'etiti ụlọ akụ dị iche iche na ụlọ ọrụ iwu site na SWIFT International payment network.
Ndị nke netwọk ahụ ugbu a karịa 10 puku ụlọ ọrụ ego na mba 210. Nke a na-enye gị ike ịzigharị ego ịkwụ ụgwọ na mba dị iche iche na ego dị iche iche n'ọtụtụ mba mepere emepe.
Kedu esi nyefee ego site na SWIFT usoro online?
Ọtụtụ ụlọ akụ na-enye ikike izipu mba SWIFT zuru ụwa ọnụ na-ebufe n'Ịntanet site n'akpa akaụntụ gị n'enweghị ahapụ ụlọ.
Iji zipu ego gaa mba ọzọ, banye akaụntụ bank gị ("Banking Ịntanetị", "onye ntanetị n'ịntanetị") n'ime ụdị nke nnyefe ụwa, mgbe ahụ mejupụta ozi dị mkpa banyere onye natara, ị ga-enwe ike izipu ego ná mba ọzọ ego nke onye natara ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, ị nwere ike ịkpọ Bank gị ma nweta ndụmọdụ ndị ọkachamara zuru ezu.
Kedu esi ezite ego n'aka Bank?
Enwe ego ọ bụla na mba gị nwere ike ịnyefe SWIFT. Nleta nke onwe gị na Bank ma kwuo atụmatụ gị ịme azụmahịa ma nye Banyere ego banyere onye natara ya ozugbo na onye ọrụ ego. Ndị ọrụ bank ga-eme ma mezue ihe niile maka gị, usoro azụmahịa ahụ agaghị ewe karịa 15 nkeji.
Kedu ihe ndekọ ego dị mkpa maka azụmahịa?
Iji nyefee ego na mba ọzọ, onye ahịa kwesịrị ịma nkọwa zuru ezu SWIFT gbasara anụ ahụ ma ọ bụ onye iwu kwadoro, nke a ga-ezitefe ya.
- aha nke onye na - erite uru (ihe atụ BANGKOK BANK PUBLIC CO..LTD)
- koodu na usoro SWIFT (ihe atụ BKKBTHBK )
- nọmba akaụntụ nke onye nnata
- aha na aha nna nke onye natara ya
SWIFT dị mma maka izipufefe na ikpe ndị a:
- Ịrụ ọrụ ego buru ibu n'èzí na mbenata ụgwọ Commission.
- Ịzụta ihe ịntanetị na-echekwa n'èzí.
- Ịkwụ ụgwọ nke ọrụ nke ndị ọrụ ala ọzọ.
- Ịnyefe ego buru ibu nye ndị mmadụ maka nzube ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ọ ga-ahụrịrị na arụmọrụ niile arụpụtara na usoro SWIFT dị ezigbo mma.
Ihe niile, tinyere ego, ọrụ maka ya, ka usoro ahụ n'onwe ya. Nchikota nke ihe ezi uche na ihe ndi ozo adighi ekwe ka mgbanwe obula, karia, ihe nkpochi nke puru ime ka enweghi ike imegharia ozi n'oge obula site na SWIFT.
Ewezuga onye ahịa na onye nnata, ọ dịghị onye nwere ike ịgụ ọdịnaya ya.
Ọsọ nke izipu SWIFT nyefee na mba ọzọ?
Ọ na-emekarị ka onye ahụ nweta ego ahụ n'ime oge 24 (ụbọchị ọrụ). Oge kachasị n'usoro ga-ewe ụbọchị 3-5 dị na akaụntụ nnabata.
Iji nweta nkọwa ndị ọzọ banyere ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa maka usoro ị na-edebe na ebe nrụọrụ weebụ anyị, biko kpọtụrụ anyị